Hordhaca: Heegan FC Vs Horseed Fc- Kulankan Ciidanka Qaranka- Xogta Kulanka Iyo Sheeko Walba La Xiriirta Ciyaartan. – Gool FM
Hordhaca: Heegan FC Vs Horseed Fc- Kulankan Ciidanka Qaranka- Xogta Kulanka Iyo Sheeko Walba La Xiriirta Ciyaartan.
(Soomaaliya) 25 Juunyo 2019 – Kooxaha Heegan iyo Horseed ayaa galabta ku ballansan garoonka Banadir Stadium ciyaar qeyb ka ah horyaalka Somali Premier League ee fasal ciyaareedkan 2018-19.
Ciyaartan ayaa dhaxmari doonto kooxaha Horseed iyo Heegan waana kulanka loogu magac daray (Derby Army), hadii aan ku micneyo kulanka Ciidanka Qaranka, Kooxda Horseed waxey matasha Ciidanka Xooga dalka halka Heegan ay sumad u tahay Ciidanka Booliska, sidaa darteyda ayaa loogu magac daray kulanka Ciidanka.
Caadiyan markii labadan kooxod iskaga hor imaanayan horyaalka iyo tartamada kale waxaa garoonka lagu arko taageerayal badan iyo quumiyadaha ay kala Matalan taas oo ah ciidamo kala duwan sida ciidanka Booliska oo taageero u muujinaya Heegan halka Ciidanka Xooga dalka ay sacabada u tuman kooxda kubadda cagta Horseed.
Kooxda Horseed sanadkan waxey rabta iney ku guuleysato horyaalka iyado maankeyda ku heesaha wiilasha Dekedda halka Heegan ay u ordooso kaalimaha hore ee horyaalka.
Afartii kulan ee ugu dambeysay ay labadan kooxod isku arkan horyaalka Somali Premier League waxaa labo kamid ah badisay naadiga Heegan sido kale hal kamid ah waxaa adkaatay Horseed halka kulanka kale ay bar baro ku kala baxeyn labada dhinac taas oo ka dhigan in Heegan ay awood sareyso marka aan ka cabir qaadano afartan kulan.
Kulankii ugu dambeyay ay is wajahan wareega hore horyaalka iminka soconaya waxaa soo adkaatay naadiga Heegan waxeyna ugu soo adkaatay 1-0, ciyaar dhacday 22-03-19.
Heegan kulankii ugu dambeyay waxey 2-0 ugu soo adkaatay naadiga Midnimo waxeyna goolasha ugu mahadcelineysa weeraryahankeeda Igama kaaso oo shabaqada tagay labo jeer waxaan caawiye ka ahaa goolasha xidiga lagu magacabo Mahad Baseey oo khadka dhexe ugu ciyaara Heegan.
Xidigaha Heegan waxaa dib ugu soo laabanaya kabtankooda Cumar Qaxtaani kaas oo dhawac ugu maqnaan kulankii ugu dambeyay balse kulan ciyaareedka waa mid taam u ah inuu xirto calaamada xushmada ee kooxdiisa.
Horseed kulankii ugu dambeyay waxey bar baro 1-1 la soo gashay kooxda sanadkan ay kuwada dagaalamayan horyaalka ee Dekedda.
Wiilasha Horseed dheeshan waxaa siyaabooyin kala duwan ugu maqnaanaya xidigaha kala ah Nuune Hashim oo saddex jaalo ku seegayo, Farxan duqow oo dhawac ku maqnaanyo ciyaarta iyo Cadaani oo isagana dhaawac ku seegayo, waxeyna qeyb ka yihiin xidigahan kuwa muhiim u ah safka kooxda Horseed.
Kooxda Horseed ayaa leh 33-dhibcood halka heegan ay leedhahay 28-dhibcood.
22/03/2019 Horseed S.C 0 : 1 Heegan S.C
06/03/2018 Horseed S.C 0 : 0 Heegan S.C
29/04/2018 Heegan S.C 1 : 0 Horseed S.C
Kooxaha: Heegan fc iyo Horseed Fc
Mohamed Salah oo loogu baaqay inuu ka tago Liverpool oo uu ku biiro kooxda…
Kulamada caawa la ciyaarayo Koobka Qarammada Afrika 2019 iyo saacadaha ay soo galayaan